Category Archives: Gabay
Posted on Jimce, Luulyo 1, 2011 by Jidhidhico	• Faallo u dhaaf
Ma ogtihiin in kowda Luulyo kun sagaal boqol iyo lixdankii ay ahayd maalin Jimce ah, sida maanta oo kale? Waxa suurtagal ah in dad badan oo inaga mid ihi ay maalintan farax ku xusuusanayaan; halka qaar kalena ay murugo ku xusayaan maalintan. Si kastaba ha ahaatee, ku soo dhawaada qoraalkan iyo gabaygan is wata, oo … Sii akhri →
Posted on Isniin, Nofeembar 29, 2010 by Jidhidhico	• 2 Faallo
Gabaygan “Qufful,” oo uu teriyey Kayd Maxamed Cabdalla, waxa uu gabyaagaas dabeebtay ku furay tuduc-tiraabahakan: “… waxa aan halkan ku qabanayaa gabay ku saabsan hoggaan-beeleedka, sida: Boqorka, Suldaanka, Ugaaska iyo garaadada. Waxaa jirtay in nin waliba reerkiisa askari, looyar, amma xaakin u ahaa intii aan ilbaxnimada dawladnimo la gaadhin. Markii bulashadu ismaashushay guud ahaan—ee la … Sii akhri →